Fursadaha Mashruuca - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Mashaariicda Capstone waxaa loogu talagalay inay ku dhiirrigeliyaan waayeelka inay sahmiyaan himilooyinkooda! Fadlan dhagsii badhanka, hoosta, si aad u sahamiso fikradaha mashruuca una aqriso qoraalada barta ee muujinaya khibradaha xiisaha leh ee ardayda.
Eeg liiska mashruuca ardayda laga bilaabo 2018 iyo 2019
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka socda baraha ardayda ee 2019
Hooska Shaqada / Layli
Ardayda doorta inay hooska u shaqeeyaan waxay doortaan xirfad ay qorsheynayaan inay ku daba galaan. Mashruuc wanaagsan oo Senior Capstone ah ayaa loo qaabeyn doonaa si ardaygu si uun ugu lug yeesho. Qorsheyn buuxda oo lala yeesho Mentor-gaaga Xirfadlaha ah ayaa kaa caawin doonta hubinta khibrad macno leh.
Khasab kuguma aha inaad maalin walba la qarash gareyso Xaruntaaga Xirfadlaha ah. Isaga ama iyadu ayaa mas'uul ka noqon doona kormeerka mashruucaaga goobta shaqada, laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa mid taajir ah oo la shaqeysa dad kala duwan. Mashruuc wanaagsan wuxuu ku siinayaa dhowr qodob oo aragti ah.
Isbitaalka Xoolaha Intern
Tababbarka Maxkamadda Degmada Hennepin
Sahaminta Xirfadaha Caafimaadka ee Isbitaalka
Qoob ka ciyaarka Studio Intern
Waaxda Booliska Intern
Layli ku yaal Bangi
Layli xarun sharciyeed
Gudaha gudaha Tiyaatarada Casho ee Chanhassen
Weligaa ma jeclaan lahayd inaad sameyso mashruuc cilmi baaris qoto dheer ama mashruuc hal abuur leh oo ka baxsan baaxadda dugsiga sare? Halkan waa fursaddaada! Hubso in mashruucu kugu qaadan doono 50 + saacadood in laguu dhammaystiro (ugu yaraan shan saacadood / maalin). Xusuusnow in lagaa sugi doono inaad la wadaagto aqoontaada mashruuca iyo waxyaabaha muhiimka ah ee aad qaadato qof, koox ama meel ka faa'iideysan kara waxaad baratay Yaad u gudbin doontaa macluumaadkaaga? Ayaa ka faa'iideysan doona waxa aad baraneyso? Waxaad wali u baahan doontaa inaad haysato Mentor Xirfadle ah; xaaladdan oo kale, waxay noqon kartaa aqoonyahan ama xirfadle kormeeri kara shaqadaada.
Sawir qaadista Minnetonka / Twin Cities
Faa'iidooyinka Waxbarashada Xannaanada Hore
Qabashada Aqoonsiga Dugsiga ee Sawirka
Saamaynta Wasakhowgu u leeyahay Deegaanka
Isbarbardhiga tayada biyaha ee magaalooyinka mataanaha ah
U Samee Meel Cusub oo La Kordhiyay Dugsiyada
Saamaynta Noocyada Duurjoogta ah ee Dhaqaalaha Deegaanka
Miyaad ku raaxeysataa shaqada adeegga bulshada oo aad jeceshahay inaad taas ku noolaan karto? Mise waxaad dooneysaa inaad ku quusto wax u qabashada bulshada? Waad la shaqeyn kartaa Mentor Xirfadle ah oo shaqadiisu tahay inuu qabto bulshada ama samafalka. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad hubiso in mashruucu yahay mid kaa qaadan doona 50 saacadood ama ka badan (ugu yaraan shan saacadood / maalin). Kaqeybgalka dhacdo uma qalmi doonto inaad sameyso mashruucan. Waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso daaha gadaashiisa si aad u dhiirrigeliso, aad u dejiso, uga qaybgasho oo aad uga fikirto dhammaan howlaha.
Twin Cities Habitat for Humanity (Degmooyinka Magaalooyinka Mataanaha ah)
Iskaa wax u qabso ugu tabaruca Minneapolis / Minnetonka
Beerta Gale Woods
Ku saabsan Capstone
Agaasimaha Barnaamijka Capstone